FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA MALTESE - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika maltese
Voahangy ny Maltese mitsiky aminao
Alika liona maltese
Ny Maltese dia alika kely matevina misy volo landy. Ny vatana dia matevina, tsara volon-doha, saingy mafy orina ary somary lava kokoa noho ny hahavony ary misy topline avo lenta. Lalina ny tratra. Somary boribory kely eo amboniny ny karandohany miaraka amina fijanonana antonony. Ny vodin-tsavony lava volo, fa tsy amin'ny teboka iray. Ny kavina pendant sy ambany dia apetraka akaikin'ny loha ary be volo. Ny maso mainty dia lehibe, boribory ary atokana antonony miaraka amin'ny sisiny mainty. Mainty ny orona misy vavorona. Ilay alika dia manana palitao silky, sosona tokana izay fotsy na ivoara maivana. Rehefa tazomina lava sy voalamina toy ny alika fampisehoana izy dia mihantona, manaloka ny sisin'ny vatana saika hatramin'ny tany (22cm eo ho eo), mihantona amin'ny sisiny roa amin'ny tsipika afovoany ary tsy mikofokofoka sy olioly na kinky. Tompona maro no misafidy ny manapaka ny palitao ho fohy kely sy mora fikarakarana alika kely.
Ny Maltese dia be fanahy, velona ary milalao. Malemy fanahy, be fitiavana, matoky ary mahafoy tena amin'ny tompony. Be saina. Mahay mianatra fika. Sahy ary haingana ny fanentanana ny fanairana raha misy tabataba mampiahiahy. Alika mpiara-miasa mahazatra io: mahafinaritra sy tiana. Mety tsara amin'ny biby hafa tsy alika sy alika hafa izany. Tia milalao any ivelany ny maltese. Ny sasany tia mitsambikina amin'ny puddles. Angamba sarotra vaky trano . Raha omenao ny sombin-databatra izy ireo dia mety ho tonga mpihinan-kanina. Aza avela hivoatra ireo alika ireo Syndrome kely alika , fitondran-tena ateraky ny olombelona izay inoan'ny alika fa izy dia mpitarika ho an'ny olombelona. Izany dia miteraka ambaratonga samihafa olan'ny fitondran-tena . Raha mino ny alika ny alika dia mety ho snappish amin'ny ankizy ary na dia ny olon-dehibe aza. Aza manaparitaka loatra na miambina loatra ireo alika kely ireo, fa ho lasa tsy milamina izy ireo, ary mety hialona ny mpitsidika ny sasany. Maltese avela hisolo ny trano, amin'ny maha-lehiben'ny olombelona azy, dia mety hivoatra ihany koa fanahiana fisarahana , fiambenana ary mivonkina. Tsy toetra malta ireo, fa ny fihetsika entin'ny fomba itondran'ny alika ny olona manodidina azy. Ireo fitondran-tena ireo dia hiala rehefa voahodidin'ny tranon'omby ny alika mpitondra entana .
Haavony: Lehilahy 8 - 10 santimetatra (21 - 25 cm) Vehivavy 8 - 9 santimetatra (20 - 23 cm)
Lanja: 6½ - 9 pounds (3 - 4 kg)
sisin-tany collie alika kely heeler
Mora amin'ny sunburn manasaraka ny volo, ny hoditra, ny olana amin'ny maso, ny taovam-pisefoana ary ny fihenan-tsofina. Ny sasany mety ho sarotra ny hanome sakafo azy malemy sy mahasosotra fandevonan-kanina. Mety hahazo ny mangatsiaka izy ireo ary miaina tsy fahazoana aina amin'ny andro mafana. Maltese dia tokony hotehirizina tsy ho any amin'ny faritra mando. Mora voan'ny aretin-nify koa. Ny famahanana biskitra alika maina ankoatry ny sakafony mahazatra dia afaka manampy ny nify hadio sy ho salama.
Alika tsara amin'ny fiainana an-trano ny Maltese. Mavitrika be izy ireo ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany.
Maltese mila a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazany rehetra, ny lalao dia tsy hahatanteraka ny toetrany voalohany handeha. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotanin-trano mimanda. Mijanona milalao hatramin'ny fahanterany izy ireo. Mavitrika ao an-trano izy ireo.
Manodidina ny 15 na mihoatra ny taona. Mety haharitra 18 taona izy io, saingy ilaina ny hitazona azy io tsy ho lena.
alika manga boribory pitbull
Ny famonoana sy fanosotra ny palitao isan'andro dia zava-dehibe fa malemy paika, satria malefaka be ilay palitao. Diovy ny maso isan'andro mba hisorohana ny fandotoana, ary diovy ny volombava aorian'ny sakafo noho io antony io ihany. Mandrosoa shampooing maina na maina tsy tapaka, hahazoana antoka fa maina sy mafana avy eo ilay biby avy eo. Diovy ny sofina, ary esory ny volo maniry ao anaty lakandrano. Ny maso dia tokony hozahana tsy tapaka ary diovina raha ilaina. Ny volo eo an-tampon-doha dia afatory matetika amin'ny fonon-tànana mba tsy ho hitan'ny masony. Ny tompona biby fiompy sasany dia misafidy ny hanapetaka ny volo fohy mba hahamora sy tsy handany fotoana firy. Ny Maltese dia mandatsaka kely tsy misy volo ary tsara ho an'ireo marary allergy.
Ny Maltese dia novolavolaina tany Italia. Voalaza fa manana spaniel kely izy ary Poodle ra Ny Maltese dia nekena voalohany ho toy ny karazany any Malta, izay nahazoany ny anarany. Fantatra tamin'ny anarana hoe 'Ye dogge of Malta'. Ny mpanjaka dia tompon'antoka manerana an'izao tontolo izao. Nentin'ireo vehivavy izy ireo tamin'ny tanany ary natory tao am-pandriany izy ireo. Ny Crusaders no nody tany Angletera aloha izy ireo avy any Mediterane. Ny Maltese dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny taona 1888.
pitbull sy amerikanina bully mix
Alika maltese kalitaon'ny olon-dehibe kalitao — Sary nahazoana alàlana avy amin'i David Hancock
'Ity i Maggie, Maltese iray taona tamiko. Tena marani-tsaina izy, ary matetika mandeha amin'ny tongony aoriana. Fantany ihany koa fa rehefa tonga ny fotoana hatoriana dia fotoana koa ho an'ny taolany. Fifaliana toy izany izy ary ananantsika NIANARANAO betsaka amin'ity tranonkala ity momba Training izy. '
Latte Maltese vita amin'ny ivoara maivana amin'ny faha-3 taonany
Jellybean the Maltese 12 taona misotro amin'ny vilia volomboasary lehibe
Jellybean the Maltese amin'ny 12 taona
'Maltese antsoina Prince, fantatra amin'ny anarana hoe NutPup, amin'ny faha-3 taonany -' Mijere foana eny an-dalana, NutPup. ''
Lilly sy Gracie Maltese lehibe
Nemo the Maltese at 1 taona— 'Ny endrik'alika alika alika dia afaka mandresy ny fon'ny olona rehetra!'
Alika kely Maltese lahy dimy herinandro miaraka amin'ny reniny roa taona
Alika kely Maltese lahy 5 herinandro
Vehivavy maltianina roa taona
Lilly the Maltese puppy amin'ny faha-4 volana— 'Lilly dia Maltais voasoratra anarana avy any Abbeville, GA. Mipetraka ao amin'ny trano fonenana any Knoxville i Lilly ary tompon'ny mpianatra amin'ny anjerimanontolo manontolo ao amin'ny University of Tennessee Knoxville no manana sy tiany. Amin'ireto sary ireto dia manodidina ny 4 volana izy. Faly be izy amin'ny fomba fiainana, fa tia mihazakazaka sy milalao amina faritra malalaka sy feno ahitra rehefa afaka. Mailo be izy ao an-trano ary 'hampaneno ny fanairana' raha maheno zavatra izy. Tiany ny milalao miaraka amin'ireo mpiray trano aminy amin'ny alika mandra-pahatongan'ny reraka sy ny fianjerana mifanila amin'izy ireo. Lilly dia manatanteraka ny banga ao amin'ny fianakaviana ho an'ny mpianatra eny amin'ny oniversite ary tena be fitiavana sy be fandavan-tena. Izy tia mitsako , dia tena ilaina tokoa ny sakamalao pensilihazo mitovy habe amin'ny pensilihazo. '
Lilly the Maltese puppy amin'ny 4 volana
Lilly the Maltese —'Ny reniny, mpianatra tany amin'ny oniversite, dia 'Skyping' tany an-tranony rehefa nila niala izy nandritra ny minitra roa. Rehefa niverina nanatrika ny fivoriana Skype izy dia nandray ny toerany i Lilly ary niresaka tamin'ny raibeny sy renibeny izay niara-nipetraka taminy nandritra ny fahavaratra! '
Jereo ohatra misimisy kokoa amin'ny Maltese
Sary maltese 1
Sary maltese 2
Alika maltese: sary an-tsokosoko voaangona
afangaro amerikana bulldog sy pitbull amidy
alika omby australianina faritany collie